Iyo chaiyo HUB yeMac yako ndeye Choetech M20 | Ndinobva mac
Paunotenga MacBook nyowani unoziva kuti uchafanirwa kutenga hub ine madoko akati wandei kuti ukwanise kubatanidza zvimwe zvezvigadzirwa zvako zvekare, kungave nekuti i USB A kana nekuti iwe unofanirwa kuti uve neHTMLMI port kana Ethernet port.
Chero chingave chikonzero, chinhu chine musoro ndechekuti iwe unofanirwa kuve nechimwe chinhu chakabatana neMacBook yako nyowani saka Choetech inoita kuti zvive nyore kwatiri neiyi hub inonzi M20. Pasina kupokana, ndiyo nhare chaiyo kana iwe uchigara uine michina patafura, kunyangwe tichigona kuishandisa kunze kwehofisi kana imba, hongu, zvinokurudzirwa kuti ugare uchizvishandisa patafura sezvo yakanyatsogadzirirwa ichi.
Zvine musoro kuti isu tinogona zvakare kuishandisa isina tafura uye ndizvo yayo 15cm yakareba tambo inobvumira kubatana pasina kuda kuiswa munzvimbo yayo yepanyama. Muzviitiko izvi, zvakanakisa kutsvaga rumwe rudzi rwehubhu uye iyo Chinese yakasimba Choetech ine yakanaka kodhi yavo, ese akakurudzira.
1 Iyo M20 inokutendera iwe kuchengetedza yakakwana kunyora mamiriro
2 Choetech M20 Kubatana
3 Kuenderana neApple Macs
4 Dhizaini uye yekugadzira zvinhu
Iyo M20 inokutendera iwe kuchengetedza yakakwana kunyora mamiriro
Imwe yemabhenefiti mazhinji eiyi M20 hub ndeyekuti inotibvumidza kusimudza iyo keyboard zvishoma kuti tikwanise pedza maawa nemaawa uchitaipa nenzira yakasununguka. Iyo Choetech hub inongorebesa zvakakwana kuti iyo keyboard yeMacBook yedu isimudzwe, saka typing nekhibhodi inoitwa mune yakanyanya kusununguka nzira.
Zviripachena kukura uye huremu kana uchizvitakura idiki "hurema" hune hubhu uhu. Kuyerwa kwayo hakusi kuwedzeredzwa asi kwakakura kupfuura akajairwa hubs: 26,8cm kureba x 4,5 yakafara x 1,6cm pakukora pane chikamu chakakora. Pasina mubvunzo chakanakisa pane zvese ndechekuti nenhamba yezviteshi zviripo isu hatizodi chero chimwe chinhu kubatanidza zvese zvishandiso zvatinoda.
Choetech M20 Kubatana
Ichi chikamu chatiri isu tese takamirira uye chakanyanya kuonekera pamwe nekugadzirwa kwayo. Kubatana kwacho kwakawanda uye zvakanakira kuve nazvo kumashure uye pasi peMacBook zvinoita kuti zvinyatso kuvanzwa uye zvakavanzika kubva pakuonekwa. Icho chiri chaizvo hub yezvishandiso uye has 11 connections:
1 x HDMI chiteshi: 4K @ 30Hz
1 x VGA chiteshi: 1080P @ 60Hz
1 x Gigabit Ethernet RJ45: Kumhanya kwakanyanya kuri 1000Mbps
3 x USB 3.0 A zviteshi: Dhata yekufambisa inomhanyisa kusvika ku5 Gbps.
1 x USB C 3.0 chiteshi: dhata yekufambisa chete, hapana mutoro.
1 x USB C PD Yekuchaja Port: Kuendesa Simba 100W Kutengesa
1 x SD / TF Kadhi Muverengi: Kurumidza 70MB / s
1 x 3,5mm jack uye wedzera maikorofoni
Ehezve, chinzvimbo chekubatanidza chinoita kuti zvinhu zvive nyore kwazvo kana tiinazvo patafura neMacBook iri pamusoro. Dhizaini yeiyi hub ndiyo kiyi yekubudirira kwayo sezvo ichipa imwe nzira kune echinyakare hubs uye zvinoita sekunge kubudirira kwatiri.
Wedzera isiri-slip chikamu chinoita Kubata zvese tafura pachayo uye MacBook yakachengeteka zvachose yekuvimbika kweMac yedu.
Kuenderana neApple Macs
Mune ino kesi, iyo femu inotitaurira kuti inowirirana nemaMac mazhinji ane chiteshi che USB C, asi anosiya runyorwa navo kuitira kuti tisazove nematambudziko erudzi rupi nerupi uye tisati tatanga kutenga, tichazviongorora. Aya ndiwo maMac anoenderana neM20:
MacBook Pro kubva 2016 kusvika yazvino 2020 modhi
12, MacBook 2015 kusvika 2018 modhi
MacBook Mhepo kubva 2018 kuenda kune yazvino modhi kubva 2020
MacBook Retina 2015 uye 2016
iMac 2017 kusvika 2019 modhi
New MacBook ine Kutinhira 3
Choetech pachayo inoratidza rondedzero yemidziyo inoenderana kunze kweApple uye isu tinogona kutaura kuti kune akawanda. Tarisa kuenderana.
Dhizaini ndiyo kiyi yeiyi hubhu inokwanisa kushandura MacBook yako kuita desktop Mac ine zvisingaverengeke zviteshi zvezvose zvaunoda uye nezvimwe. Pasina mubvunzo zvigadzirwa zvekugadzira zveM20 izvi zvemhando yepamusoro, zvinowedzera aruminiyamu kunze uye iyo USB C yekubatanidza tambo kune iyo michina inosanganisirwa muhubhu nekuda kune slot kune rumwe rutivi.
Nezve iwo mavara hapana zvakawanda zvekutaura kubvira inongowanikwa mune space grey. Zviripachena, chengetedzo yakakosha kana uchibatanidza chimwe chinhu kuMacBook yedu uye nekudaro zvemukati zvinowedzerwa mukati meiyi hubhu zvinopa dziviriro kubva kungangoita maseketi mapfupi kana akakwirira emagetsi.
Izvo hazvidikanwe kuve nehubhu yakabatana nesimba rekuishandisa, asi isu tinogona kubhadharisa iyo MacBook tichishandisa chaiyo chiteshi cheayo.
Choetech imwe yemafemu ayo anopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamitengo inonzwisisika. Mune ino kesi mutengo wehubhu ndeye 54,99 euros.
Kuisa hub yacho sechigadziko
Nhamba yezviteshi zviripo
Space grey kupedzisa chete
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Iyo yekupedzisira HUB yeMac yako ndiyo Choetech M20